Ifayibha yokuPhelisa iBhokisi abavelisi kunye nabaxhasi - China Ifayibha yokuPhelisa iBhokisi yokuPheliswa kweFektri
FTTH ngeenxa zonke drop cable
Fibre optic Splice ukuvalwa, ...
Ukuhanjiswa kwefiber optic bo ...
Ifayibha optic imenyu intambo kunye ...
Ftth yehla intambo yentsimbi ...
Ifayibha ibhokisi yokupheliswa kokunye okunye okubizwa ngokuba yibhokisi yesiphelo sefayibha yesixhobo esisisiphelo sefayibha ye-fiber optic, isiphelo esinye yintambo ebonakalayo kunye nomsila we-fiber optic. Iibhokisi zokuphelisa i-fiber optic zikulungele ukudibanisa intambo ye-fiber optic kunye ne-pigtail, ibonelela ngendlu ekhuselekileyo nekhuselekileyo ekhusela iifayibha kunye nokwenza uhlolo olulula kunye nokusasazwa kwinethiwekhi ye-FTTx.
Ibhokisi yokuhambisa iJera yenziwa ngokwamabakala okhuseleko e-IP, avumela iibhokisi ezisetyenziswa ngaphakathi nangaphandle. Isetyenziswa njengendawo yokuphelisa intambo ye-feeder ukuqhagamshela nge-drop cable kwi-FTTx inkqubo yenethiwekhi yonxibelelwano. Ukucoca ifayibha, ukwahlulahlula, ukuhambisa kunokwenziwa kule bhokisi, kwaye ngeli xesha kubonelela ngokhuseleko oluqinileyo kunye nolawulo lwesakhiwo senethiwekhi se-FTTx.
Iibhokisi zokuhanjiswa kwefayibha ye-fiber optic zahlulwe ngokombane wefayibha amandla.Iibhokisi zethu zokupheliswa ziyakwazi ukufakelwa ngeentambo zefayibha, iintambo zepatch, intambo yeehagu ngendlela elula.
UJera uye waphanda uninzi loyilo lwebhokisi yokuphelisa ifayibha, siyazinikezela ekuboneleleni ngeemveliso ezithembakeleyo, ezizinzileyo kunye neendleko kubathengi bethu. Iibhokisi zokuphelisa ifayibha yeJera zibonelela ngokhuseleko ngoomatshini, ulawulo lwefibre eguqukayo kunye nolawulo.
Sinikezela ngazo zonke izinto ezenziwayo zokwakha uthungelwano lwe-FTTH: iadaptha ye-fiber optic, intambo ye-fiber optic patch, ukuvalwa kwe-fiber optic splice, ukulahla ii-clamp ze-cable, izibiyeli zepali, iibhendi zentsimbi engenanto kunye nokunye. Ezifumaneka kwilabhoratri yethu yangaphakathi, enje ngo-70 ℃ ~ -40, ubushushu kunye novavanyo lokufuma lokuhamba ngebhayisikile, uvavanyo lwamandla okuqina, uvavanyo lokuguga, uvavanyo lwe-IP njl.
Nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi xa ufuna iinkcukacha ezithe kratya malunga nebhokisi yokuhanjiswa kwefiber optic.
Ifayibha ibhokisi yokuhanjiswa kwentambo, iFODB-16X
I-Ftth ibhokisi yesiphelo yekhebula, i-FODB-16A.1
Ifayibha ibhokisi yokuhanjiswa kwentambo, i-FODB-2
Ibhokisi yokuphelisa intambo yefayibha, i-FODB-4
Ibhokisi yokuhambisa i-fiber optic, i-FODB-6
Ibhokisi yokuhambisa intambo yangaphakathi, i-FODB-8R
I-Ftth yefayibha yefektha yefayile, i-ODP-02
Iziseko zokuhanjiswa kwefayibha, i-ODP-06
I-Ftth fiber optic faceplate, i-ODP-01H
I-ftth faceplate, i-ODP-04
Ifayibha socket yokuhambisa ebonakalayo, i-ODP-02M
Ifayibha yokhuseleko lwetyala, PC-1-1